Ogaden News Agency (ONA) – Wardagdag ah – CWXO oo weerar aaro ah ku qaaday cadawga
Wardagdag ah – CWXO oo weerar aaro ah ku qaaday cadawga
Warar lagu farxo oo Xarunta Dhexe aan ka helnay ayaa naloogu sheegay inay naftood-hurayaasha CWXO qaadeen dagaalo loogu aarayo dadkii shacabka ahaa ee cadawga uu ku xasuuqay meela kala duwan oo ka mid ah dalka.
Weerarada ay qaadeen CWXO oo meela kala duwan ka dhacay ayaa bilowday taariikhda markay ahayd 31kii May 2012. Warbixinada aan ka helnay ilaa hadda Xarunta Dhexe ayaa naloogu sheegey in dagaal culus oo lagu naafeeyay cadawga ay subaxnimadii Khamiista Naftood-hurayaasha CWXO ku qaadeen 3ex xero ciidan oo cadawga uu ku lahaa tuulada Buladari. Weerarka lagu qaaday xeryahaa oo si kadis ah oo qorshaysan loo fuliyay waabarigii ayaa cawadga ku riday argagax, iyadoo mudda yar ka dibba gacanta lagu wada dhigay 3exdii xeraba. Waxaa goobtaa qudha lagaga jaray 98 askari oy ku jiraan 6sarkaal, iyadoo lagaga furtay cadawga hub iyo saanad badan oy ku jiraan qoryaha culculus.
Mudda yar ka dib ayaa waxaa dhexda loo galay gurmad uu cadawga ka soo diray xeryaha Jigjiga oo dharbaaxo xun lagu dhuftay, dibna loogu celiyay meeshay ka soo baxeen markii 19 ka mid ah dhulka la dhigay.
Isla maalintaa 31kii May ayaa wxaa kamiin loo dhigay kolonyo ciidamada cadawga ah aaga Birqod. Kolonyadaa oo u kala socotay Dhagaxbuur iyo Gari-go’an ayaa cadawga lagaga gubay laba gaadhi halkaasoo ay ku basbeeleen ciidan lagu qiyaasay 50meeyo. Ciidankan ayaa ku sii socday aagaga ay xasuuqa ka fulinayeen cadawga, waxaana u suurtagashay CWXO inay dib u celiyaan ciidamadii cadawga.
Waxaa intaa dheer habeenadii 26,27,28 oo ku aadanayd maalmaha ay Woyaanaha u dabaadagaan qabsashadoodii xukunka Itobiya ayaa waxaa laga fuliyay hawlgalo culus in kabad 10 magaalo oo ay ka mid yihiin: Q/dahare, Dh/bur, Wardheer, Danood, Caado, iyo goobo kale iyada oo cadawga loo khadhaa-dhaynayo faan-faanka beenta ah, wayna qabsan waayeen xafladihii u qorshaysnaa.
Wixii warar ah ee ka soo kordha la socda.